ထိန်းလို့မရအောင် ငိုကြွေးနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ချော့မြူနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းအချို့
Home Lotaya ထိန်းလို့မရအောင် ငိုကြွေးနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ချော့မြူနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းအချို့
မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးရဲ့ မိခင်ဖခင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးထိန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ငိုကြွေးနေတဲ့ကလေးငယ်ကို ငြိမ်အောင်ချော့ရတာလောက် ခက်ခဲတဲ့အရာမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ကလေးတိုင်းကတော့ ဘာကြောင့်ငိုတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းအရင်းမရှိကြသလို သူတို့အတွက် လူကြီးသူမတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ဒီလိုငိုကြွေးခြင်းအပြင်မရှိလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဒိုက်ပါကို အချိန်မှီမလဲပေးတာ သို့မဟုတ် အိပ်ချင်လို့ဆိုပြီးပြောပြချင်လို့ ငိုကြွေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးကငိုနေတဲ့အခါ ဘာလို့ငိုမှန်းမသိလို့ ချော့ရခက်နေတယ်ဆိုရင် အခုပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ။
အင်မတန်ငိုကြွေးနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ချော့တဲ့အခါမှာ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့အသံဟာ ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ သီချင်းဆိုတာဖြစ်ဖြစ် သီချင်းညည်းတာဖြစ်ဖြစ် ချော့ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်ကိုနှစ်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ကိုအသာအယာခေါ်လိုက်ပြီး ပေါင်ပေါ် သို့မဟုတ် ပုခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ ဘယ်ညာလွှဲကာ ညင်ညင်သာသာလှုပ်ရှားပေးလိုက်ပါ။ အခုလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းက မိခင်ဖခင်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ လုံလုံခြုံခြုံရောက်နေပြီဆိုတာကို သတိပေးရာရောက်နိုင်ပါတယ်။
စည်းဝါးကျပြီး ငြိမ်သက်တဲ့အသံလေးတွေကို ဖွင့်ပေးခြင်းက မိခင်ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှာရှိတုန်းက အချိန်ကို ပြန်လည်သတိရစေပြီးတော့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကလေးငယ်ကို လက်မှာပိုက်ထားပြီးတော့ ဟိုဖက်ဒီဖက်ကို ညှင်ညှင်သာသာလွှဲပေးရင်း လေသံတိုးတိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ကလေးကို လက်တွန်းလှည်းထဲထည့်ပြီးတော့ စိတ်ခံစားချက်ပြောင်းစေဖို့အတွက် လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါ။ ကလေးတွေဆိုပေမယ့်လည်း အလွယ်တကူပျင်းရိတတ်သည့်အတွက်ကြောင့် ကစားစရာအရုပ်လေးတွေနဲ့ အသံလေးတွေပေးကာ သူတို့ကိုမြှူပေးပါ။
ကလေးကိုအနှီးလေးနဲ့ ထုပ်ပိုးထားခြင်းက မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာရှိနေစဥ်တုန်းကလို ငြိမ်သက်ပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိစေတဲ့အချိန်တွေကို ပြန်ပြီးတွေးမိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနှီးဖြစ်ဖြစ် စောင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လုံလုံခြုံခြုံထုပ်ပိုးထားပေးလိုက်ပါ။ ငိုတာလည်းတိတ်စေနိုင်သလို အိပ်ပျော်ဖို့အတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးများကို အခြားသော Media ၊ Website များနဲ့ facebook Page များမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကူးယူဖော်ပြခြင်းမပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Previous articleမွေးကာစကလေးငယ်တွေ ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိရှိထားရမယ့်အချက်များ
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုများပြားပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ကလေးငယ် အနိုင်ကျင့်ခံနေရပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
လျစ်လျူရှုရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကလေးအပြုအမှု (၇)မျိုး
ခေတ်သစ်မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ပညာပေးဖို့ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကို ဘာ့ကြောင့် မယုံကြတော့တာလဲ?